World jiga	Shuruudaha isticmaalka
By helitaanka this site, aad ogolaato in lagu xidho by Shuruudaha bogga intarnetka iyo shuruudaha isticmaalka, dhammaan sharciyada iyo xeerarka, oo isku raaceen in ay aad masuul ka tahay la raacayo qaanuunka maxaliga ah ay khuseyso. Haddii aadan ku raacsanayn mid ka mid ah shuruudahan, aad waxaa ka mamnuuc ah isticmaalka ama helitaanka this site.
Loo fasaxay in si ku meel gaar download hal nuqul ka mid ah qalabka (warbixin ama software) goobta internetka ee Meteodb qof, daawashada meel aan ganacsiga ahayn oo kaliya. Tani bixinta shatiga, ma kala iibsiga lahaanshaha, iyo liisanka hoos laga yaabaa in aadan:
Qalabka loo isticmaalo ujeeddooyin ganacsi ama wax bandhigay dadweynaha (ganacsi ama aan ganacsiga ahayn);
isku dayaan in ay kala hufto ama dib u software kasta oo ku jira on Meteodb web site ah;
ka saar copyright kasta ama la qaatey kale lahaansho qalabka ay ka; ama
wareejiyo qalabka qof kale, "muraayad" agabka on server kasta oo kale.
Liisanka Tani waxay si toos ah u joojin doonaa haddii aad ku xad wax ka mid ah, kuwaas oo xayiraad iyo in la joojiyo laga yaabaa in mar kasta Meteodb. Marka aad ka bixida daawashada qalabkan ama joojinta liisanka this, waa in aad baabbi'in qalab kasta oo lagala soo bixi in aad hantida haddii in elektaroonik ah ama daabacay qaab.
Qalabka on goobta waa Meteodb bixiyo "sida uu yahay". Meteodb ka dhigaysa damaanad lahayn, muuqata ama dadban, oo halkan ku afeefanaysaa oo ay masaxdaa oo dhan damaanad kale, oo ay ku jiraan xad la'aan, fasaxyada ama shuruudaha merchantability, taam ujeeddo gaar ah ama non-jebinta xuquuqda hantida aqooneed ama xadgudub xuquuqda kale. Intaa waxaa dheer, Meteodb ma dammaanad qaadayso ama wax Wakiilada saabsan saxnimada, natiijooyinka badan tahay, ama isku hallayn karo isticmaalka qalabka ay web site ama la xiriira qalabka sida ama wax goobaha lala in this site haddii kale.
Haddii ay dhacdo ma Meteodb.com ama ganacsatada ka ay masuul ka ah wax kasta oo waxyeelo u noqon (oo ay ku jiraan, aan loo kala soocin, magdhawga khasaaraha xogta ama faa'iido, ama ay sabab u tahay kala go 'ganacsiga,) ka soo shaac baxa adeegsiga ama awood la'aanta in ay isticmaalaan qalabka website-ka Meteodb in xitaa Meteodb Meteodb ama wakiilka idman ayaa la ogeysiiyo hadal ama qoraal ah oo macquul ah oo ah magdhow sida. Sababtoo ah qaar ka mid ah maamulada hana u oggolaan in xadeyn ku saabsan fasaxyada, ama xadeyn ah mas'uuliyad khasaaraha dhasha ama dhaca ah, xuduudahan waa laga yaabaa in aanay adiga ku khusayn.
5. Isbeddellada iyo kaabidda
Qalabka lagu soo bandhigay barta internetka ee Meteodb ka mid noqon kara farsamo, typographical, ama khaladaad sawiro. Ma damaanad Meteodb in mid ka mid ah agabka ay goobta yihiin kuwo sax ah, oo dhammeystiran ama hadda. Meteodb laga yaabaa in isbedel ku qalabka ku jira ay web site waqti kasta ogeysiis la'aan ka hor dhigi. Meteodb ma, si kastaba ha ahaatee, ka go'an wax kasta oo ay u cusboonaysiiyaan qalabka.
Meteodb aan dib u eegay oo dhan oo ka mid ah goobaha ku xiran goobta ay Internet, oo mas'uul kama aha waxa ku qoran wax kasta oo goobood oo kale. Ka mid noqoshada ee link kasta oo ma tilmaamayso ayidaad goobta Meteodb. Isticmaalka kasta oo websites sida halis ugu adiga kuu gaar ah.
Shuruudaha guud iyo xaaladaha khuseeya isticmaalka website-ka.